» हेटौँडामा आए बेलायती राजदुत रिचर्ड मोरिस
हेटौँडामा आए बेलायती राजदुत रिचर्ड मोरिस
२७ मंसिर २०७५, बिहीबार १३:५८
हेटौँडा, २७ मंसिर । नेपालका लागि बेलायती राजदुत रिचर्ड मोरिसलाई हेटौँडामा स्वागत गरिएको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालको अध्यक्षतामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मोरिसलाई स्वागत गरेको हो ।
राजदुत मोरिसको स्वागत तथा छलफल कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष कटुवालले मकवानपुर जिल्लाको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रमा विशेष सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै मकवानपुर र बेलायती लगानीकर्तासंग उद्योग व्यापारमा सहजीकरण तथा मकवानपुरलाई शैक्षिक केन्द्र बनाउन तथा आई.ई.एल.टि.एस को परिक्षा लिने व्यवस्था संघको सहकार्यमा हेटौंडामै गराउन समेत अध्यक्ष कटुवालले आग्रह गरे । डि.एफ.आई.डी.सँग आवश्यक सहकार्य गरी अघि बढ्न आवश्यक पहल गरिदिनका लागि पनि उनले अनुरोध गरे ।
Richard Morris In Hetauda- Murchunga TV
संघका कार्य समिति सदस्य नरेन्द्र भण्डारीले संघको विगतदेखि वर्तमानसम्मको अवस्था र संघले बेलायती राजदुतबाट अपेक्षा गरेको विषयवस्तुको विषयमा प्रस्तुतिकरण पेश गरेका थिए । संघको निर्माणाधीन अतिथि गृह र आगामी फागुनमा हुन गईरहेको राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको विषयमा पनि राजदुत मोरिसलाई जानकारी गराइएको थियो ।
पहिलो पटक मकवानपुर आएका रिचर्स मोरिसले नेपालको तीब्र आर्थिक विकासमा बेलायत साथी बन्ने बताए । नेपाल र बेलायतबीच दुईसय दुई वर्ष पुरानो सम्बन्ध रहेको स्मरण गराउँदै नेपालले अब तीब्ररुपमा आर्थिक विकास गर्ने अपेक्षा आफूले लिएको उनले बताए । डि.एफ.आई.डी. मार्पmत नेपाललाई विगत ५ दशकदेखि सहयोग गर्दै आएको र मकवानपुरमा पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग भईरहेको उनले बताए ।
द्विदेशीय व्यापार प्रवद्र्धनमा पनि आपूmले सक्दो प्रयास गर्ने बताउँदै मेरिसले आर्थिक विकासकालागि विदेशी लगानी पनि आउन जरुरी रहेको बताए । मकवानपुरको प्राकृतिक अवस्थाले आपूm अत्यन्तै मोहित भएको र यहाँ पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेकोले यसकालागि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण पनि उनले गराए ।
संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अरुणराज सुमार्गीले राजदुतले छोटो निमन्त्रणामा मकवानपुर आइदिएकामा धन्यवाद व्यक्त गरे । संघका महासचिव प्रमोदसिंह रानाभाटले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा डि.एफ.आई.डी.का टिम लिडर कर्टिस पामर, नेपाल ब्रिटेन उवासंघका सदस्य दिनेश पौड्याल, संघका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाकार केशव श्रेष्ठ, उत्तमशर्मा ढकाल, जीवनकाजी माकजु श्रेष्ठ, भुवनलाल श्रेष्ठ तथा सल्लाहकारहरु, संघका पदाधिकारी तथा कासस एवम् आमन्त्रित सदस्य महिला उद्यमी विकास समितिका सदस्य, कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
संघको विशेष पहलमा मकवानपुर मोरिसले प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसंग भेटघाट तथा छलफल गरेका थिए । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका, मध्य नेपाल क्षेत्रीय पर्यटन समितिका प्रतिनिधिहरुसंग पनि भेटघाट तथा छलफल गरेका थिए । उनलाई मकवानपुरको चुरियामाई सुरुङ्ग, शहिद स्मारक, मनकामना मन्दिरको अवलोकन पनि गराईएको थियो ।
मिस वर्ल्डको ट्यालेन्ट प्रतियोगितामा मिस नेपाल श्रृङ्खला के भईन् ?